Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » WTM London dia namoaka an'i Saodita ho mpiara-miombon'antoka voalohany amin'ny 2021
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Arabia Saodita • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Fahd Hamidaddin, tale jeneralin'ny Saudi Tourism Authority (STA).
Arab Saudi Arabia dia manatsara ny diany manerantany hahatratra 100 tapitrisa mpitsidika isan-taona amin'ny 2030.
Ny Saudi Arabia dia nanokatra ny varavarany sy ny fony voalohany tamin'ireo mpizahatany fialam-boly iraisam-pirenena tamin'ny volana septambra 2019.
Ny fiaraha-miasa matanjaka amin'ny WTM London dia hiantoka ny fametrahana an'i Saudi ho mpilalao manerantany.
Ny vinan'ny Saodiana 2030 dia drafitra iray ho an'ny ho avy ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ny Fanjakana Saudi Arabia.
Saudi, ny trano tena izy any Arabia dia nambara ho mpiara-miombon'antoka voalohany amin'ny WTM London 2021 satria manaparitaka ny diany manerantany hahatratra 100 tapitrisa ny mpitsidika isan-taona amin'ny taona 2030.
Ny tanjona kendrena dia ampahany amin'ny Vision 2030 an'ny Saodita, drafitra ho an'ny ho avy ara-tsosialy sy ara-toekarena ao Arabia Saodita, natao hanaparitahana ny toekarem-pirenena ary hamoronana indostrian'ny fizahantany miroborobo.
Ny fiaraha-miasa avo lenta miaraka amin'i WTM London hiantoka ny fametrahana an'i Saudi ho mpilalao lehibe manerantany ary mitarika toerana fizahan-tany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Fahd Hamidaddin, CEO an'ny Fahefana fizahantany Saudi (STA), hoy izy:
“Miaraka amin'ireo delegasiona mpiara-miasa sy tetikasa ary solontenam-pitaterana lehibe indrindra hatreto, ny fahatongavanay any amin'ny WTM London amin'ity taona ity dia manan-danja amin'ny fametrahana an'i Saodita ho iray amin'ireo tanjona fialamboly vaovao indrindra eran-tany ho an'ireo mpilalao indostrialy iraisam-pirenena lehibe. Ny tolotra fizahan-tany saodiana dia tokana, maro karazana ary tsy hita ary manantena ny fandraisana ireo mpitsidika WTM London amin'ny fandraisam-bahiny izay ahafantarana anay. ”
“Vonona izahay amin'ny fananganana bebe kokoa ny Saudi marika, manitatra ny fanatrehantsika iraisam-pirenena ary manangana fifandraisana amin'ireo mpiara-miombon antoka matoky tena izay hanampy anay amin'ny fitantanana ny fiovam-po amin'ny tsenan'ny loharanom-baovao lehibe. ”
Ny delegasiona Saodiana ao amin'ny WTM London hampiroborobo sy hamporisihana ny fahatsiarovan-tena momba ny kolontsaina manankarena, ny lova ary ny fizahantany fizahan-tany mahafinaritra. Ao amin'ny pavilion, ny vahinin'ny WTM London sy ny mpitsidika dia hanana fotoana hijerena ny sorona alehan'ny Saodiana, amin'ny dia mifampitohy mamakivaky ny tany efitra sy lohasaha maitso, toerana arkeolojika taloha ary zava-mahatalanjona ao amin'ny Ranomasina Mena.